Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Haiti Breaking News » Maty tamin'ny horohorontany tany Haiti tamin'ny 1400 mahery
Karaiba • Haiti Breaking News • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Maty ny horohorontany tany Haiti - sary natolotr'i @aliceexz - twitter
Ny trano vaky dia tsy inona fa rava, misaraka amin'ny ray aman-dreniny ny ankizy, ary ny Tropical Storm Grace dia mety hitondra oram-be mivadika ho tondra-drano sy fihotsahan'ny tany taorian'ny horohoron-tany lehibe 7.2 namely an'i Haiti tamin'ny sabotsy 14 aogositra 2021. Androany dia nahatratra 1,419 ny isan'ireo maty .
Trano 7,000 mahery no natsangana, ary olona maratra 6,900 farafaharatsiny.
Ny praiminisitra Haiti Ariel Henry dia nanambara fa vonjy maika ny iray volana.
Ambonin'ilay horohoron-tany, i Haiti dia miatrika ny herisetra ataon'ny andian-jiolahimboto mitohy sy ny famonoana ny filohany Jovenel Moise izay maty voatifitra tany an-tranony, iray volana lasa izay.
Ny horohoron-tany dia nianjera tany amin'ny faritra atsimo andrefan'ny firenena ka namela tanàna vitsivitsy rava tanteraka ary olona an'arivony tsy manan-kialofana. Trano 7,000 mahery no natsangana, ary misy olona maratra 6,900 farafaharatsiny, ary maro amin'izy ireo no miandry hopitaly. Betsaka amin'ireo naratra no miatrika ny mety ho fihanaky ny tsimok'aretina ka mihitsoka ao amin'ireo singa tsy misy fitsaboana.
sary natolotry ny obama.org
Ny tanànan'i Les Cayes amoron-tsiraka dia mafy simba noho ny horohoron-tany miaraka amin'ny fianakaviana maro izay mihantona amin'ny fananana azon'izy ireo atsofoka rehefa avy nandany alina teny ivelany izy ireo.
Ny fanjakana maika dia iray volana no nanambaran'ny praiminisitra Haiti Ariel Henry. Niantso ny "firaisankina namboarina" ny PM nitadidy ny fisafotofotoan'ny ezaka fanampiana taorian'ny horohoron-tany nitranga 11 taona lasa izay.
Ny fanampiana dia entina any amin'ireo faritra tena mila izany ary toerana tsy zakan'ny hopitaly intsony. Ny fiaramanidina mpamonjy voina dia manao fiaramanidina fanampiana betsaka araka izay azo atao avy amin'ny tanàna maro ao amin'ny firenena.
Samantha Power dia nantsoina ho toy ny USAID Administratera nataon'ny filoha amerikana Joe Biden hanara-maso ny fanampiana avy any Etazonia ho an'i Haiti. Iraka fikarohana sy famonjena olona 65 no alefa avy any Virginia. Ny US Coast Guard dia mitondra olona maratra miaraka amin'ireo mpitsabo miaraka amin'ny sambo sy ny fiaramanidina. Samaritan's Purse, vondrona fanampiana monina any North Carolina, dia mandefa manam-pahaizana manokana miisa 13 hamonjy voina sy famatsiana vonjy maika 31 taonina.
Ny UN World Programme dia miasa mba handefasana entana be dia be amin'ny sakafo amin'ny talata.
Ny hetsika ataon'ny andian-jiolahy dia manasarotra ny ezaka fanampiana, indrindra any Martissant, distrika amoron-dranomasina andrefan'ny renivohitra. Ny tompon'andraikitra dia tsy maintsy nifampiraharaha tamin'ireo andian-jiolahy nanaiky ny hamela ny andiana antokon'olona 2 hamonjy iray andro.
Ho fanampin'ny herisetra ataon'ny andian-jatovo mitohy, Haiti dia miatrika ny famonoana olona tsy ela akory izay ny filohany Jovenel Moise izay maty voatifitra tany an-tranony vao iray volana lasa izay namela ny firenena tao anaty korontana politika. Ary raha te-hanadino izany dia mazava ho azy fa misy ny fanamby amin'ny valanaretina COVID-19.
Raha ny fanadihadiana nataon'ny US Geological Survey (USGS) dia nisy horohoron-tany nahatratra 5.2 taorian'iny horohorontany iny, narahin'ny horohoron-tany 9 izay antenaina kokoa amin'ny andro ho avy.
Filoham-pirenena Guyana Irfaan Ali
Hafatry ny fanantenana avy any Guyana
Nanambara tao amin'ny bitsika iray ny People Pevs Progressive Party Civic / Guyana fa nanambara ny biraon'ny praiminisitra Guyana fa natsangana ny kaonty banky handray fanomezana ho an'ny ezaka fanampiana ny horohorontany any Haiti. Novakiana tamin'ny ampahany ny fanambarana:
“Mifanaraka amin'ny fanoloran-tenan'ny governemanta handray andraikitra haingana sy matanjaka ho setrin'ny horohorontany nandrava vao haingana tao amin'ny fanjakan'ny rahavavintsika CARICOM ao amin'ny Repoblikan'i Haiti, ary taorian'ny resadresaka an-tariby mivantana tamin'ny sabotsy lasa teo teo anelanelan'ny filoham-boninahiny Irfaan Ali sy ny praiminisitra haitiana vao notendrena, ny manan-kaja Dr. Ariel Henry, ny biraon'ny praiminisitra dia nanangana kaonty amin'ny maha-olona miaraka amin'ny Republic Bank (Guyana) Limited, amin'ny anaran'ny Komisiona miaro ny sivily.
"Ny OPM dia hiara-hiasa akaiky amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny sehatra tsy miankina ary ny mpiara-miombon'antoka amintsika hafa hanangona vola haingana ho an'ny valinteny fanampiana lehibe ho an'ireo olona voan'ny Haiti.
“Ny fanapahan-kevitr'i Guyana hijoro amin'ny firaisankina amin'ny fotoan-tsarotra sy amin'ny fotoan-tsarotra miaraka amin'ireo rahalahintsika sy anabavintsika CARICOM manerana ny faritra dia mijanona ho marin-toerana. Tahaka ny efa nataontsika taloha, dia hanambatra angovo sy loharanon-karena izahay hihaonana amin'ny fanamby farany momba ny maha-olona mba hitondra fampiononana sy fanampiana ireo rahalahintsika sy anabavintsika Hatianina haingana araka izay tratra.
"Angatahinay ny Gyanianina any am-pielezana hanatevin-daharana ny ezaka ataonay mba hanomezana fanampiana lehibe amin'ny alàlan'ny valinteny iraisana."